Mitsikera Mafy An’i Shina Noho ny Fanjavonan’ireo Mpivaro-boky ao Hong Kong Ny Vondrona Eoropeana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Mey 2016 15:33 GMT
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Kris Cheng ary nivoaka voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 16 Aprily 2016. Navoaka eto amin'ny Global Voices ity dika ity noho ny fifanaraham-piarahamiasa.
Nilaza ny Vondrona Eoropeana fa ny raharaha fanjavonan'ireo mpivaro-boky no mametraka “olana goavana indrindra” amin'ny lalàmpanorenana Hongkongey sy ny fitsipika “firenena iray, rafitra roa” – fitsipika milaza fa eo ambanin'ny fiandrianam-pirenen'i Shina Komonista ny tanàna, saingy malalaka tanteraka amin'ny fitantanana ny raharaha politikany sy toekareny manokana – hatramin'ny nanoloran'i Fanjakana Mitambatra ny zanataniny taloha Hong Kong ho an'i Shina tamin'ny 1997.
Tamin'ny tatitrany isan-taona [fr], nandrisika an'i Beijing ny Vondrona Eoropeana mba hametraka fitokisana indray amin'ireo mponin'i Hong Kong sy ny fiarahamonina iraisampirenena ao anatin'ny fifampiraharahana momba ny fizakantenan'ny tanàna.
Hongkongey mpivaro-boky dimy nivarotra boky manana lohateny mitabataba mitsikera ny governemanta no tsy hita tao Thailandy, Shina ary Hong Kong tamin'ny 2015 ary nipoitra ihany tao amin'ny Shina Tanibe izy ireo, ary nilaza fa niara-niasa an-tsitrapo tamin'ny fanadihadiana ofisialy. Mizaka ny zom-pirenena ao amin'ny firenen'ny Vondrona Eoropeana ny roa tamin'ireo olona tsy hita. Nilaza ny tatitra fa:
Ahitana fanitsakitsahana goavana ny zon'olombelona sy ny fahalalahana fototra ny raharaha ary mametraka ahiahy goavana mikasika ny firenena tan-dalàna manoloana ny fitsipika «firenena iray, rafitra roa» sy ny fampiharan'ny manampahefan'ny Shina Tanibe ny lalànan'ny [Repoblika Etim-bahoakan'i Shina] amin'ireo hetsika tontosain'ny mponin'i Hong Kong ao amin'ny tanin'i Hong Kong.
Navoakan'ny Vaomiera Eoropeana sy ny Sampan-draharaha Eoropeana misahana ny raharaha Ivelany tamin'ny 25 Aprily ny tatitra isan-taona.
Nilaza ny tatitra fa i Lee Bo, teratany Britanika izay nanjavona tao Hong Kong, dia toa «nisy naka an-keriny»:
Na dia teo aza ny fitakiam-baovao sy fanazavana naverimberina nataon'ireo manampahefana ambony ao Hong Kong [rafi-pitantanana manokana] sy ny Vondrona Eoropeana ary koa ireo mpikambana hafa ao amin'ny fiarahamonina iraisampirenena, tsy nahavita nanome fanazavana azo antoka ny manampahefan'ny [Repoblikam-bahoakan'i Shina].
Tsy vao voalohany ny Vondrona Eoropeana no namoaka fanambarana mahakasika ny raharaha – ny voalohany, izay nivoaka tamin'ny volana Janoary dia mitaky fanokafana fanadihadiana. Nandray fanapahan-kevitra ihany koa ny Parlemanta Eoropeana tamin'ny volana Febroary izay maneho « fanehoana lehibe » mikasika ny fanjavonana.
Dingana fanovana ara-pifidianana
Nilaza ihany koa ny Vondrona Eoropeana tao anatin'ny tatitra fa nanantena an'i Hong Kong hametraka ny dingana fanovana ara-pifidianana sy hahavita fifanarahana momba ny rafi-pifidianana demokratika, malalaka, misokatra sy mangaraharaha izy:
Ny latsabatom-bahoaka dia manome fanohanam-bahoaka betsaka kokoa sy ny fankatoavam-bahoaka ny governemanta amin'ny ezaka ataony mba hahatratra ny tanjona ara-toekarenan'i Hong Kong sy miatrika ireo fanamby ara-tsosialy, tahaka ny hantsana ara-tsosialy sy toekarena ary eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka eo amin'ny fiarahamonina Hongkongey.
Tsy nolanian'ny Filan-kevitry ny mpanao lalàna tamin'ny volana 2015 ny drafitra fanavaozana ara-politikan'ny governemanta, izay nanolo-kevitra fa tokony ankatoavina amin'ny alalan'ny fanendrena ataon'ny komity ny kandidà ho lehiben'ny mpanatanteraka, araka ny iantsoana ny mpitarika ambonin'ny tanàna.
Voalaza ao anaty tatitra ihany koa ny fitsipahana ny fanendren'ny filan-kevi-pitantanana ilay liberaly mpampianatra lalàna Johannes Chan Man-mun ho pro-vice-chancelier ny oniversiten'i Hong Kong ihany “noho ny fifandraisany amin'ireo vondrona mpanohitra”:
Mandrahona ny fitantanana mahaleotenan'ny oniverisite ity fomba fanao ity ary mety hanohintohina ny fahalalahan'ny fampianarana ambony ao Hong Kong rehefa ela ny ela. […] Niteraka fitakiana fanesorana ny Sefon'ny Fitantanan-Draharaha amin'ny maha chancelier azy avy hatrany an'ireo oniversite rehetra ao Hong Kong ny fifandirana.
Nanasongadina ireo fanamby hafa ao Hong Kong ny tatitra, anisan'izany ny fahasarotan'ny fitadiavana mpitsara, ny tsy fisian'ny ekipa mpanatontosa asa ao amin'ny fitsarana ary ny karama kelin'ny mpisolovava amin'ny raharaha fiarovana ara-pitsarana, indrindra ny raharaha heloka bevava.
Nilaza tamin'ny onjam-peom-panjakana RTHK ny mpitondra tenin'ny governemanta fa ny Lalàna Fototra, araka ny iantsoana ny lalàmpanorenan'i Hong Kong, sy ny fitsipika firenena iray, rafitra roa dia mandeha tsara hatramin'ny naha-lasa an'i Hong Kong ho fari-pitantanan'i Shina, ary tsy tokony hitsabaka amin'ny raharaha anatin'i Hong Kong ny governemanta sy ny mpanao lalàna vahiny.